Olu luvavanyo lokuqala lwe-AirPods Max | Ndisuka mac
Olu luvavanyo lokuqala lweMaxPods Max
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo ngaphandle kokuba sele sinokubonakala kokuqala kwezinye abona baphembeleli babalaseleyo kwihlabathi leApple njengoJustine noMarques Brownlee. Kule meko imveliso ekubhekiswa kuyo yi-AirPods Max entsha kwaye kufanelekile ukuba ube nokuqala kokuvela kunye nokungaphendulwa kwebhokisi kwezinye ii-headphone ezithiwe thaca kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ziboniswe njengeziphelile ngenxa yokunqongophala kwesitokhwe .
Kodwa siya kwinto enomdla kuthi ngoku kwaye siza kubona izimvo zikaBrownlee kunye neentsomi iJustine. Ke siqala nge ividiyo epapashwe kwimizuzu embalwa edlulileyo nguMarques:
Ngokuqulathiweyo umxholo ubhalwe ngesiNgesi kodwa ungongeza isiguquli seYouTube ukuba awuqondi kakuhle:
Uphengululo lweJustine luhlala luyinto engaphezulu kwimowudi ye "fan", inohlobo olukhethekileyo kwaye inokuba nenjongo engaphantsi kuneMarques Brownlee's. Nokuba yeyiphi na, sele siqala ukubona ukuvela kunye neevidiyo apho ezi ntloko zintsha kunye nezikhethekileyo zeApple zibonakala ngathi, njengoko besesitshilo apha ngasentla, azisekho. Ukuthunyelwa kwilizwe lethu kuphawula uJanuwari 8 njengomhla, kodwa eMelika le mihla imbi kakhulu kwaye ukuthunyelwa kulungiselelwe inyanga kaMatshi.
Siyathemba ukubona uphononongo ngakumbi malunga neefowuni zokuqala ze-Apple ezinoyilo lwebhanti kwaye sinethemba lokuba lwenziwe ngumntu othile I-100% yeaudio iyaqondwa kuba lolu hlobo lomsebenzisi ekuthi le mveliso intsha ye-Apple ijolise kuyo, i-audio purists.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Olu luvavanyo lokuqala lweMaxPods Max
I-Apple Watch ilawule imarike ye-smartwatch kwikota yokugqibela